Umhla My Pet » Uthando 7 Amanyathelo Easy
Ukuwa eluthandweni ngomnye mvakalelo lwemilingo ehlabathini. Ezizalisiweyo ngobomi ecocekileyo nolwaneliseko, ngokuba uthando nomntu ekunene ikwenza uzive ngathi unako koyisa nantoni. Xa ngokwenene umntu, ebehlelwe zombini uvuyo kunye nosizi bubungqina wokwenene ekunyanisekeni kukusondela ubudlelwane. Nangona uthando inzima, ngezantsi esele siyichazile yintoni uthando kwakunye nendlela yokufikelela uthando oluhlala kwiindawo 7 amanyathelo alula.
inyathelo #1: Eyona
iqabane umphefumlo wakho lilindele ukuba nifunyanwe. Ngamaxesha amaninzi, uyazi ukuba unelungelo xa udibana esinye isiqingatha yakho, ngenxa yemiphefumlo yenu ezimbini ukuqhagamshelana nawe uya kuvakalelwa ngokungathi nimazile ngonaphakade. Xa ke nithe namfumana olu, kubalulekile ukuba anikele ingqalelo kuphela phezu ezincomekayo. Ukukhangela iimpazamo kwiqabane lakho kuya kukhokelela kuphela ilihlwili. Uyafunda ukwamkela zonke iinkalo yeqabane lakho kwaye imbuyekezo, uya kufumana ukunyaniseka ngothando olungunaphakade kwaye.
inyathelo #2: Nokubonelela iimfuno iqabane lakho
Kuyo nayiphi na indlela yokwalamana kubalulekile ukuba iimfuno zakho a lingane namaqabane zakho. Uninzi xesha uya kuba kwiphepha elinye kodwa khona apho kuya kubakho osenokuhlaselwa namaxesha xa neemfuno zakho ezahlukeneyo. Kubalulekile ukuba wena ibindim iqabane lakho ukuba aqinisekise ukuba zonke iimfuno zabo.
inyathelo #3: Mamela iqabane lakho
Ukuphulaphula umntu omthandayo yeyona ndlela ibhetele bafunde abo ukongeza ukuhlangabezana njani neemfuno zabo. Oku kuya kukunceda ukuba uzive ezidityanisiweyo kwiqabane lakho, uyiqondayo apho kwi imizabalazo zobuqu, Ndiyazixhasa ngamaxesha anzima, omda- neendlela ezahlukeneyo ukubanceda uze uzenze ndincume. Njengoko abantu, siya ukufunda rhoqo kwaye nokukhula leyo nto ukumamela kubalulekile ekugcineni uthando lwakho olomeleleyo.
inyathelo #4: Kuxabise iqabane lakho
Ngokunyanisekileyo xabisa zonke izinto ezilungileyo iqabane lakho izinto ezintle ukuba ngaba kuya kukunceda womeleze ulwalamano lwakho. Usoloko okulungileyo kwenza kube lula ukuba ezinye izinto, ngoyaba iziphazamiso ekungavisiswana, kwaye ukwamkela umsebenzi ukuphila ngokuvisisana amaqabane akho kulindelekileyo.
inyathelo #5: Chitha ixesha kunye neqabane lakho
Ukucwangcisela ixesha ukuchitha kunye kubalulekile ukuba ukhule isibini. Ngokuchitha ixesha kunye, uya kufumana ukwabelana iingcinga zakho, iimvakalelo, kunye neengxaki. Neli xesha ekwabelwana, ulwalamano lwakho nzulu nobuhlobo obusondeleyo ukongeza ngokuthandana. Undoqo ngothando olungunaphakade kukuba abe kakhulu ngabahlobo.
inyathelo #6: Yiba nobubele iqabane lakho
Ukuba ucinga into entle, uthi ukuba iqabane lakho. Ububele luphawu inqabile ngamandla kodwa uthando. Nangona kufuna ukungakhuseleki ukuba abe nobubele, ekugqibeleni ubukrwada lutshabalalisa ngentsebenziswano xa ububele ekukhathaleleni.
inyathelo #7: Gcina romance ephila
Uhambo uthando okanye yesitshixo nje kuphela zothuka egqibeleleyo kodwa amava inceda ukugcina izinto bephila kwaye uyakuthanda. Abafumana into entsha kunye kuya kukunceda ukuba ubutyhile izinto ezintsha zimnandi omnye komnye.
Ngoxa umdla esiwa eluthandweni, kubalulekile ukuqonda ukuba angathabatheki kwaye ngobunzulu asiyonto efanayo ulwalamano. Uthando kufuna inkalipho nomsebenzi, kwaye yindibaniselwano kwemiba emininzi eyahlukileyo eyenza endimthanda. Kodwa kanye uthando ifikelele kwelo zinga eqinileyo, iba ngenkxaso engagungqiyo amyoli nabuhlungu, kwaye unxibelelwano ukuze ngokwenene zingaqhawukiyo.